Fampidirana an-tsena - Propars E-export miaraka amin'ny Amazon, Ebay, Allegro ary Etsy
Fampidirana ny tsena manerantany
Ampifanaraho amin'ny tontonana tokana ny fifanakalozana varotra e-varotrao ary tantano mandeha ho azy!
Tsenan'ny firenena 5
Tsenan'i Frantsa (Tsy ho ela)
Tsenan'i Alemania (Tsy ho ela)
Amerika (Tsy ho ela)
Global (Ho avy tsy ho ela)
ERP / Program momba ny kaonty
Fampidirana ny tsena
Raha mivarotra ny vokatra ao amin'ny fivarotanao amin'ny Internet ianao dia hahazo vola bebe kokoa. Eny. Fantatry ny rehetra izany ankehitriny. Ireo tompona trano fivarotana izay tsy naharaka ny fandehan’ny andro ka nilaza hoe “Nisokatra ny toeram-pivarotana, tonga ny internet, nanjavona ny mpivarotra” dia tonga saina fa tsy manan-tsafidy afa-tsy ny miditra amin’ny internet tsirairay. Ary marina tokoa fa ny Internet sy ny fivarotana an-tserasera no mpamonjy anao. Mety ho tezitra amin’izany ny sasany aminareo ka hiteny hoe: “Avy aiza ity, mivarotra amin’ny Internet, e-commerce, tsy haiko hoe inona...”. Na tianao na tsy tianao, ny e-varotra no hany fomba hivelomana sy hahazoana vola bebe kokoa. Manontany ianao hoe nahoana? Satria mpanjifa an-tapitrisany maro lavitra, izay tsy afaka mandalo eo anoloan'ny varavaran'ny fivarotanao, no mandeha amin'ny Internet isan'andro. Raha manana fivarotana amin'ny Internet ianao, mpanjifa an-tapitrisany izay tsy afaka miala amin'ny Internet intsony noho ny finday marani-tsaina no mandehandeha manodidina ny varavaran'ny fivarotanao amin'ny Internet imbetsaka. Ao anatin'ny andro vitsivitsy dia mahita ny tenanao manomana baiko ho an'i Sivas, Ankara ary na dia ireo tanàna tsy alehan'ny entana aza ianao. Araka ny antontan'isa avy amin'ny Propars, ny fivarotana iray izay tsy mirotsaka amin'ny e-varotra ary manana vokatra 500 eo ho eo dia mampitombo ny vola miditra amin'ny 35% ao anatin'ny enim-bolana aorian'ny nanombohan'ny e-varotra. Ankoatra izany, io no taha ambany indrindra fantatra. Mbola maro kokoa ireo mahomby. Ny ankamaroan'ny orinasa manomboka e-varotra dia manomboka mandray baiko 1-2 isan'andro ao anatin'ny 10-15 volana raha tsy manao fahadisoana naterak'izy ireo. * Ny mpanjifa an-tserasera dia tsara lavitra noho ireo tonga ao amin'ny fivarotanao. Omeny isa ambony ianao rehefa mahazo ny baikonao, izay fonosinao tsara ary alefanao ao anatin'ny 1-2 andro; tsy manantena firy ny ankamaroany; Ampy ho azy ireo ny manao zavatra haingana sy tsara fanahy. Aza manohitra ny e-varotra. Avia ary manomboka mivarotra ny vokatra ao amin'ny fivarotanao an-tserasera, ampitomboy ny vola miditra sy ny tombony.
Eny ary, inona ny vokatra amin'ny Internet?tena amidy ve?
mivarotra vokatra amin'ny Internet misy fomba roa:
Manangana tranokala ary amidio ny vokatrao avy any,
N11.com, mandeha izany, Hepsiburada.com Mba ho mpikambana amin'ny tranokala toy ny fanokafana fivarotana sy fivarotana vokatra.
Manorena tranokala ho anao ary mivarotra vokatra:
Raha vao manomboka amin'ny e-varotra ianao dia fomba sarotra ho anao ity. Satria misy tranokala an-tapitrisany amin'ny Internet, midika izany fa manana mpifaninana an-tapitrisany ianao. Amin'izao fotoana izao, tsy mora ny manangana sy mitantana tranokala, manatsara ny SEO, mametraka toerana ambony amin'ny tranokala fikarohana toa an'i Google. Lafo koa izany. Mitaky fametrahana tetibola ho an'ny dokam-barotra sy fandoavana orinasa na manam-pahaizana maro. Satria raha tsy sariaka amin'ny finday ny tranokalanao, tsy manana endrika tsara tarehy sy mahomby, na raha tsy misy laharana ambony ao amin'ny Google, indrisy, tsy mandeha izany. Raha tokony hanao fampiasam-bola sy fandaniana toy izany rehefa manomboka e-varotra, manomboka amin'ny mora kokoa aloha. Ka ny safidy hafa. Mazava ho azy fa tokony hanana tranokala manokana ho anao ianao, ao anatin'ny vanim-potoana maoderina isika izao. Saingy raha manao ny e-varotra mora amin'ny safidy faharoa ianao ary mahazo vola, dia hikarakara ny tranokalanao ianao rehefa mandeha ny fotoana.
Mivarotra vokatra amin'ny tranokala toy ny N11, Gittigidiyor:
Ity misy fomba mora sy mora hanombohana e-varotra. Misy tranokala lehibe efatra any Torkia izay ahafahanao miditra sy mivarotra vokatra. Antsoinay hoe efatra lehibe izy ireo eo anivontsika: •N11.com •Gittigidiyor.com •Hepsiburada.com •Sanalpazar.com Ny ankamaroan'ireo tranonkala ireo dia manao dokam-barotra amin'ny Internet sy amin'ny fahitalavitra miaraka amin'ny tetibola goavana ho anao ary mahasarika mpanjifa an-tapitrisany. Raha lazaina amin'ny teny hafa, mpanjifa an-tapitrisany mitsidika ireo tranokala ireo isan'andro. amin'ny vonona, tsy mandany vola miandry anao. Ny hany tsy maintsy ataonao dia ny miditra amin'ireo tranokala ireo ary manokatra fivarotana virtoaly. Ity dia fomba tsy dia lafo raha oharina amin'ny safidy hafa. Mitaky komisiona ianao rehefa manao varotra, ary ny sasany mitaky hofan-trano; fa ny isa dia tena mendrika. Andeha hojerentsika ny hevi-dehibe. Aorian'ny fanokafana fivarotana amin'ireo tranokala ireo dia manomboka ny fahasahiranana mahazatra amin'ny e-varotra. Mila mametraka doka ho an'ny vokatra tsirairay ao amin'ny fivarotanao ianao; izay mety haharitra andro maromaro raha manana vokatra an-jatony ianao. Mila fantarinao avy hatrany ireo vokatra lany ao amin'ny fivarotanao na mpamatsy anao ary esory avy hatrany. Satria raha tsy manaisotra vokatra izay tsy anananao ianao, ary raha misy baiko tonga amin'io vokatra io, dia handrava ny naotin'ny fivarotanao ny mpanjifa satria tsy afaka mandefa izany avy hatrany ianao. Raha manana vokatra an-jatony ianao dia hiaina izany matetika, noho izany dia hihena be ny naoty fivarotanao ary hikaton'ny tranokala ny fivarotana. Raha nanokatra fivarotana amin'ny tranokala hafa ianao, izay hosokafanao tokoa rehefa mankafy ny tsiron'ny e-varotra mamokatra, rehefa misy fivarotana amin'ny tranokala iray dia tsy maintsy mitsidika ny tranokala rehetra ianao ary mampihena ny habetsaky ny tahiry. ny vidin'ny -1. Haharitra andro sy ora ny fiezahana hanao ireo zavatra rehetra ireo amin'ny tanana fa tsy mifantoka amin'ny fanomanana ny filaminana. Handany ora maro amin'ny solosaina ianao satria mila mamaly haingana ny hafatra ho an'ny mpanjifa. Ary hiaina olan'ny e-varotra mahazatra maro hafa toa ny mpivarotra an'arivony hafa ianao.
Fa aza manahy. SATRIA fampidirana misy izany.
Inona no atao hoe Marketplace Integration?
Ny fampidirana dia midika hoe mampifandray sehatra roa miasa. Anisan'ny miasa eto ny programa fitantanana ny varotra Propars; ny iray hafa dia iray amin'ireo tranonkala toa ny N11 na Gittigidiyor. p ao amin'ny ProparsAzar place integrations misy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny Propars N11 dia tafiditra amin'ny tranokalan'ny tsena izay voalazanay, toa an'i Gittigidiyor, izany hoe mifandray amin'ny tenany, izany hoe mifandray izy io. Propars manana fampidirana tsena Amin'ny fifandraisana amin'ireo tranokala ireo dia manao ny asa mafy rehetra ho anao izany. i Paoly Apostoly fampidirana tsena izay no dikan'ny hoe: Fampidirana sy fanaovana ny asan'ny Propars! Raha mampiasa Propars ianao dia hampiakatra ny lisitry ny vokatrao any amin'ny Propars miaraka amin'ny fisie XML na Excel. Ny lisitry ny vokatrao dia ahitana ny anarana, ny kaody stock, ny habetsaky ny tahiry, ny fampahalalana amin'ny antsipiriany ary ny famaritana ny vokatra. Aorian'izay, ny Propars dia hanao ny asa mafy rehetra ary hampiasa ny fampahalalana momba ny vokatra nampidirinao ho fanokafana sy fanakatonana dokam-barotra amin'ireo tranokala rehetra ireo, fanavaozana ny tahiry sy ny maro hafa, ary tsy mila miasa ianao.
Inona no atao hoe XML? XML dia karazana rakitra mitovy amin'ny rakitra Excel araka ny fantatsika, fa voatahiry ao amin'ny Internet, fa tsy amin'ny solosaina. Amin'ny ankapobeny, manana XML ny mpamatsy anao. Rehefa mampiasa Propars dia ampy ny mangataka XML amin'ny mpamatsy anao momba ny vokatra anananao ary ampidiro ao amin'ny Propars. Raha tsy manana XML ianao dia afaka mampiasa rakitra Excel misy fampahalalana momba ny vokatra ihany koa. Amin'izany fomba izany, ny mombamomba ny vokatrao dia ampidirina ao amin'ny Propars miaraka amin'ny ampahany betsaka. Raha tsy manana vokatra betsaka ianao dia azonao atao ny manoratra ny vokatrao tsirairay amin'ny Propar alohan'ny hanombohanao.